Theophylline (သီအိုဖိုင်လင်း) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Theophylline (သီအိုဖိုင်လင်း)
Theophylline (သီအိုဖိုင်လင်း) ကဘာလဲ။
Generic Name: Theophylline (သီအိုဖိုင်လင်း) Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Theophylline (သီအိုဖိုင်လင်း) ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
Theophylline ကို ပန်းနာရင်ကြပ်ကြောင့်ဖြစ်သော အသက်ရှုကြပ်ခြင်း၊ရင်ကြပ်ခြင်း၊အသက်ရှုလျင်တရွှီရွှီအသံမြည်ခြင်းများကို ကာကွယ်ကုသရန်၊ နာတာရှည်လေပြွန်ရောင်ခြင်း၊ အဆုတ်လေခိုနာ နှင့် အခြားသော အဆုတ်ရောဂါများအတွက် အသုံးပြုသည်။ Theophylline သည် အဆုတ်ထဲသို့ လေဝင်ရာလမ်းကြောင်းများကို ပြန့်ကားကျယ်စေပြီး အသက်ရှုရ ပို၍လွယ်ကူအဆင်ပြေစေသည်။
TheophyTheophylline ကို ဆရာဝန်ညွှန်ကြားသည့်အတိုင်း သို့မဟုတ် အညွှန်းစာတွင်ရေးထားသည့် အတိုင်း သောက်သုံးနိုင်သည်။
—>Theophylline သည် သောက်ရန်ဆေးပြား၊ဆေးတောင့်၊ဆေးရည် စသဖြင့် ပုံစံအမျိုးမျိုးရှိသည်။၆နာရီခြားတခါ၊၈နာရီခြားတခါ၊၁၂နာရီခြားတခါ၊၂၄နာရီခြားတခါ စသဖြင့် ဆရာဝန် ညွှန်ကြားသည့်အတိုင်း သောက်ရသည်။ ဆေးညွှန်းကို တိကျစွာလိုက်နာပါ။ မရှင်းလင်းသည့် နေရာများရှိပါက ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပုဂ္ဂိုလ်တို့ထံ မေးမြန်းပါ။
—>Theophylline ကို နေ့စဉ်အချိန်မှန်မှန် အစာနှင့်ဝေးချိန်တွင် (အစာမစားမီအနည်းဆုံး ၁နာရီ သို့မဟုတ် အစာစားပြီး အနည်းဆုံး ၂နာရီခွာပါ) ရေဖန်ခွက်တခွက် အပြည့်ဖြင့် သောက်ပါ။
—>Theophylline သည် ရင်ကြပ်ရောဂါနှင့် အခြားသော အဆုတ်ဝေဒနာများကို သက်သာစေသည် မှန်သော်လည်း လုံးဝပျောက်ကင်းစေမည်မဟုတ်ပါ။ ထို့ကြောင့် သင်နေကောင်းသွားပြီဟု ယူဆလျှင်ပင် Theophylline ကို ဆက်လက်သောက်သုံးရမည်ဖြစ်သည်။
Theophylline (သီအိုဖိုင်လင်း) ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းရမလဲ
ဆေးအများစုမှာ အခန်းအပူချိန်တွင် သိုလှောင်ထားနိုင်ပါတယ်)
Theophylline ကို တိုက်ရိုက်နေရောင်ခြည်မထိုးအောင်နဲ့ စိုစွတ်မှုမရှိအောင်ထားတာက အကောင်းဆုံးသိုလှောင်သိမ်းဆည်းတဲ့နည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်တာနဲ့ ဆေးအနေအထားပျက်ယွင်းမှုတွေမဖြစ်အောင်လို့ Theophylline ကို ရေချိုးခန်းထဲမှာသိမ်းဆည်းတာနဲ့ ရေခဲအောင် သိမ်းဆည်းတာတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။ Theophylline ဆေးအမျိုးအစားနဲ့၊ ဆေးထုတ်လုပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီကွဲပြားမှုပေါ်မူတည်ပြီး သိမ်းဆည်းတဲ့ပုံစံကွဲပြားခြားနားမှုရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒီအတွက် ဆေးဘူးအခွံမှာပါတဲ့ သိုလှောင်သိမ်းဆည်းမှုညွှန်ကြားချက်ကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးတာမျိုး ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကို မေးမြန်းတာမျိုးကိုအမြဲလုပ်ပါ။ လုံခြုံစိတ်ချရဖို့အတွက် ဆေးဝါးတွေအကုန်လုံးကို ကလေးတွေ၊ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်တွေနဲ့ ဝေးရာမှာထားပါ။
Theophylline ကို အိမ်သာထဲကိုပစ်ချတာနဲ့ ရေထွက်ပေါက်တွေထဲကနေ ဆေးချတာမျိုးကို မလုပ်သင့်ပါဘူး။ ဆေးဝါးတွေကိုမလိုအပ်တော့တဲ့အခါ ဒါမှမဟုတ် သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားတဲ့အခါတွေမှာ စနစ်တကျစွန့်ပစ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဆေးဝါးများကို စနစ်တကျဘယ်လိုစွန့်ပစ်ရမယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ သင့်ရဲ့ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နဲ့တိုင်ပင်ပါ။
( ဆေးဝါးအများစုကို ရေခဲသေတ္တာထဲတွင် သိမ်းဆည်းနိုင်ပါတယ်။ ရေခဲအောင် သိမ်းဆည်းခြင်းတော့ မပြုလုပ်ရပါ)
Theophylline ကိုရေခဲသေတ္တာထဲတွင် သိမ်းဆည်းခြင်းက အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်နိုင်တဲ့အတွက် ရေခဲအောင်မလုပ်ရပါ။
Theophylline (သီအိုဖိုင်လင်း) အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
Theophylline ဆေးနှင့် သို့မဟုတ် အခြားသောဆေးများနှင့် ဓါတ်မတည့်သည့် လက္ခဏာများ ခံစားရဖူးပါက ဆရာဝန်ကို သေချာစွာအသိပေးပါ(ဆေးသာမက အစားအသောက်၊ဆိုးဆေး၊အစားအစာများကို တာရှည်ခံအောင်အသုံးပြုသည့်ပစ္စည်းများ သို့မဟုတ် တိရစ္ဆာန်များနှင့် ဓါတ်မတည့်ခြင်းများပါ အကျုံးဝင်သည်)။ ဆရာဝန် ညွှန်ကြားသည့်ဆေးမဟုတ်ပါက ဆေးညွှန်းကို သေချာစွာဖတ်ပါ။
၆နှစ်အောက် ကလေးများတွင် ဆရာဝန် ညွှန်ကြားချက် မရှိဘဲ Theophylline ကို မသောက်ရပါ။
အတက်ရောဂါ ရှိသူများ၊အနာရှိသူများ၊နှလုံးရောဂါရှိသူများ၊သိုင်းရွိုက်ဂလင်း ပုံမှန်ထက် ပို၍/လျော့၍ အလုပ်လုပ်သူများ၊သွေးတိုးရှိသူများ၊အသည်းရောဂါရှိသူများ။
ဆေးလိပ်သောက်သူများ၊ယခင်က ဆေးလိပ်သောက်ခဲ့ဖူးသူများ၊ စီးကရက် သို့မဟုတ် ဆေးခြောက်အငွေ့ရှုနေရသူများ။
လွန်ခဲ့သည့် ၃လအတွင်း ကိုယ်ဝန်ဆောင်ထားသူများ။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Theophylline (သီအိုဖိုင်လင်း) ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
Theophylline (သီအိုဖိုင်လင်း) ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
Theophylline သည် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအချို့ကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။ အောက်ပါလက္ခဏာများမှာ ပြင်းထန်လာပြီး မသက်သာပါက ဆရာဝန်နှင့်ပြပါ။
—> ဗိုက်အောင့်ခြင်း၊ဗိုက်နာခြင်း၊ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ဂဏှာမငြိမ်ဖြစ်ခြင်း၊အိပ်မရခြင်း၊ စိတ်တိုစိတ်ဆတ်လာခြင်း။
အောက်ပါ လက္ခဏာများပေါ်ပေါက်လာလျှင် ဆရာဝန်ကို ချက်ချင်းအကြောင်းကြားပါ။
ဘယ်ဆေးတွေက Theophylline (သီအိုဖိုင်လင်း) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Theophylline ဟာ သင်အခုလောလောဆယ်သောက်သုံးနေတဲ့တခြားသော ဆေးဝါးတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဆေးဝါးဓါတ်ပြုမှုတွေ မဖြစ်လာအောင်လို့ သင်လက်ရှိသောက်သုံးနေတဲ့ ဆေးဝါးတွေအားလုံးရဲ့စာရင်းကို လုပ်ထားပြီး (စာရင်းလုပ်တဲ့အခါမှာ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားတာတွေ၊ မညွှန်ကြားဘဲ သောက်သုံးနေတာတွေ၊ သဘာဝဆေးဘက်ဝင်ပစ္စည်းတွေအားလုံးပါဝင်ပါတယ်) ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကို အမြဲပြောပြပါ။ ဆေးဝါးတွေကို ဆရာဝန်ခွင့်ပြုချက်မပါဘဲ သောက်သုံးခြင်း၊ ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ ပမာဏကိုပြောင်းလဲခြင်းတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။
အချို့ဆေးဝါးများသည် Theophylline နှင့် ဓါတ်ပြုနိုင်သည်။ အောက်ပါဆေးဝါးများ သောက်သုံးနေပါက ဆရာဝန်ကို ပြောပြပါ။
အောက်ဖော်ပြပါဆေးတွေကိုသုံးစွဲနေတယ်ဆိုရင် Theophylline ကိုအသုံးမပြုသင့်ပါဘူး။ သင့်ဆရာဝန် အနေနဲ့ Theophylline ကို အသုံးမပြုတော့တာဘဲဖြစ်ဖြစ် သင်သုံးစွဲနေတဲ့ အခြားဆေးတွေကို ပြောင်းလိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ် ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
အောက်ဖော်ပြပါဆေးများကို ယေဘုယျအားဖြင့် Theophylline နဲ့ တွဲဖက်အသုံးပြုလေ့မရှိပါဘူး။ သို့သော် အချို့သော အခြေအနေများတွင်မူ သုံးစွဲကောင်းသုံးစွဲပါလိမ့်မည်။ အကယ်၍ ဆေးနှစ်မျိုးလုံးကို သောက်သုံးရန် လိုအပ်ပါက သင့်ဆရာဝန်အနေဖြင့် ဆေးတမျိုး သို့မဟုတ် နှစ်မျိုးလုံး၏ ပမာဏကို ပြန်လည်ချိန်ဆခြင်း သို့မဟုတ် ဆေးသောက်ရမည့် အကြိမ်ရေကို ပြောင်းလဲခြင်း စသည်တို့ကို ပြုလုပ်နိုင်သည်။
အောက်ဖော်ပြပါ ဆေးများသည် Theophylline ၏ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကို ပို၍ဆိုးကောင်းဆိုးစေနိုင်သည်။ သို့သော် အတူတကွ သုံးစွဲခြင်းဖြင့် အကောင်းဆုံးသော ကုသမှုရလာဒ်ကိုလည်း ရစေနိုင်သည်။ အကယ်၍ ဆေးနှစ်မျိုးလုံးကို သောက်သုံးရန် လိုအပ်ပါက သင့်ဆရာဝန်အနေဖြင့် ဆေးတစ်မျိုး သို့မဟုတ် နှစ်မျိုးလုံး၏ ပမာဏကို ပြန်လည်ချိန်ဆခြင်း သို့မဟုတ် ဆေးသောက်ရမည့် အကြိမ်ရေကို ပြောင်းလဲခြင်း စသည်တို့ကို ပြုလုပ်နိုင်သည်။
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Theophylline (သီအိုဖိုင်လင်း) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
Theophylline က အစားအသောက် ဒါမှမဟုတ် အရက်သေစာနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေမဖြစ်လာအောင်လို့ အစားအသောက်၊ အရက်သေစာတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်ချေရှိမရှိကို မေးမြန်းတိုင်ပင်ပါ။
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Theophylline (သီအိုဖိုင်လင်း) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Theophylline ဟာ သင့်ရဲ့ နဂိုကျန်းမာရေးအခြေအနေများနဲ့ သက်ရောက်ဓါတ်ပြုမှုတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေကို ပိုဆိုးသွားစေတာ ဒါမှမဟုတ် ဆေးသက်ရောက်မှုပုံစံပြောင်းလဲသွားတာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေအကုန်လုံးကို သင့်ရဲ့ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကို အသိပေးဖို့ အရေးကြီပါတယ်။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Theophylline (သီအိုဖိုင်လင်း) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
—>ရုတ်တရက်ကြပ်ခြင်းအတွက် —–> ကျန်းမာသော ဆေးလိပ်မသောက်သူဖြစ်လျှင် 5mg/kg နှင့် စပြီး 10mg/kg/day နှင့် ထိန်းထားပါ။
—>ရုတ်တရက်ကြပ်ခြင်းအတွက် —–> ကျန်းမာသော ဆေးလိပ်သောက်သူဖြစ်လျှင် 5mg/kg နှင့် စပြီး 16mg/kg/day နှင့် ထိန်းထားပါ။
—>ရုတ်တရက်ကြပ်ခြင်းအတွက် —–> နှလုံးသို့မဟုတ်အဆုတ်ရောဂါရှိသူဖြစ်လျှင် 5mg/kg နှင့် စပြီး 5mg/kg/day နှင့် ထိန်းထားပါ။
400mg/day ထက် မများစေရပါ။
—>ပုံမှန်စွဲသုံးရန်အတွက်—->ကျန်းမာသော ဆေးလိပ်မသောက်သူဖြစ်လျှင် 5mg/kg နှင့် စပြီး 10mg/kg/day နှင့် ထိန်းထားပါ။
—>ပုံမှန်စွဲသုံးရန်အတွက် —–> ကျန်းမာသော ဆေးလိပ်သောက်သူဖြစ်လျှင် 5mg/kg နှင့် စပြီး 16mg/kg/day နှင့် ထိန်းထားပါ။
—> ပုံမှန်စွဲသုံးရန်အတွက်—–> နှလုံးသို့မဟုတ်အဆုတ်ရောဂါရှိသူဖြစ်လျှင် 5mg/kg နှင့် စပြီး 5mg/kg/day နှင့် ထိန်းထားပါ။
ကလေးတွေအတွက် Theophylline (သီအိုဖိုင်လင်း) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
Theophylline ကို လွန်ခဲ့သော ၂၄နာရီ အတွင်း အသုံးမပြုထားလျှင် 5mg/kg နှင့်စပါ။ သို့သော် Theophyllineကို ၂၄နာရီ အတွင်း သုံးစွဲထားလျှင် 2.5mg/kg နှင့် စပါ။
ထို့နောက် 4mg/kg/day ကို သောက်ဆေးအဖြစ် အများဆုံး၄၂ရက်
10mg/kg/day ကို သောက်ဆေးအဖြစ် ၄၂ရက်မှ ၁၈၁ရက်အထိ ဆက်ပေးပါ။
လမစေ့ဘဲ မွေးခြင်းကြောင့် ကလေးအသက်မရှုနိုင်ခြင်း၊အသက်ရှုရပ်ခြင်းအတွက်
—>အသက် ၂၄ရက်နှင့် အောက် —-> 1mg/kg/dose ကို ၁၂နာရီခြား တခါ
—>အသက် ၂၄ရက် အထက် —->1.5mg/kg/dose ကို ၁၂နာရီခြားတခါ
နေ့စေ့လစေ့မွေးသော ကလေးများအတွက် —-> စုစုပေါင်းပေးရမည့်ဆေးပမာဏ = [(0.2 x အသက် (ရက်သတ္တပတ်ဖြင့်) + 5)] x ကိုယ်အလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်ဖြင့်) ရလာသော ဆေးပမာဏကို သုံးပုံခွဲပြီး ၈နာရီခြားတခါ ပေးပါ။
Theophylline (သီအိုဖိုင်လင်း) ကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်သလဲ
Theophylline ကို အောက်ဖော်ပြပါ ဆေးဝါးပုံစံများနှင့် အချိုးအစားများဖြင့် ရရှိနိုင်ပါတယ်။
Theophylline ကို သောက်သုံးဖို့ လွတ်သွားခဲ့ပါက (မေ့ခဲ့ပါက) သတိရတဲ့အချိန်မှာ အမြန်ဆုံးသောက်သုံးပါ။ သို့သော်လည်း နောက်တစ်ကြိမ်သောက်သုံးရမယ့်အချိန်နဲ့ နီးကပ်နေပြီဆိုရင်တော့ လွတ်သွားတဲ့အကြိမ်ကို ကျော်ပြီး ပုံမှန်အချိန်မှာပဲ သောက်လိုက်ပါ။ ဆေးပမာဏကို နှစ်ဆတိုးသောက်တာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့။
Theophylline. https://www.drugs.com/cdi/theophylline.html. Accessed July 25,2016.
Theophylline. https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a681006.html. Accessed July 25, 2016.
Theophylline. http://www.healthline.com/drugs/theophylline/oral-tablet#Interactions3. Accessed July 25 , 2016.